मेयर राणाको अर्जुनदृष्टि : क्यासिनो सिटी – sunpani.com
मेयर राणाको अर्जुनदृष्टि : क्यासिनो सिटी
सुनपानी । १७ मंसिर २०७७, बुधबार मा प्रकाशित
नेपालगञ्ज – नेपालगञ्जमा विशिष्ट व्यक्तित्वहरुको आगमन हुँदा नेपालगञ्जका मेयर डा. धवलशमशेरले एउटा मुद्दा उठाउनु हुन्छ, ‘नेपालगञ्जलाई क्यासिनो शहर बनाउने ।’
मेयर राणाले केही वर्षदेखि यो कुरालाई निरन्तर उठाउँदै आउनु भएको छ । भारतको ठूलो शहर लखनऊ नेपालगञ्जदेखि अढाई घण्टाको मोटर बाटोको दुरीमा रहेकाले नेपालगञ्जलाई क्यासिनो सिटी बनाउदा त्यहाँका मान्छेलाई यहाँ ल्याउन सकिने राणाको भनाई छ । मेयर राणाले भनेको क्यासिनो सिटी बनाउने कुरालाई यहाँका बासिन्दाले ‘मेयरले जुवा खेलाउने कुरा गर्दै हिड्छन्’ भन्ने अर्थमा बुझिरहेका छन् । मेयर राणा आफै भन्नुहुन्छ, ‘जुवा त खेलाउने हो । तर, नेपालीलाई होइन, विदेशीलाई ।’
क्यासिनो शहर बनाउँदा नेपालगञ्जको विकासमा त्यसले टेवा पु¥याउने मेयर राणाको निष्कर्ष छ । मेयर राणाले एउटा उदाहरण पनि दिदै आउनु भएको छ । स्नेह होटलमा क्यासिनो सञ्चालनमा रहेको छ । त्यो होटल अगाडि चिया पसल गरेर बस्ने व्यक्तिले केही वर्षमै करोडौको सम्पत्ति जोडे रे । चिया पसलेले छिट्टै करोडौको सम्पत्ति जोड्नुमा क्यासिनोको प्रभाव हो भन्ने मेयर राणाको भनाई रहेको छ । विभिन्न मञ्चहरुमा मेयर राणाले यो उदाहरण दिनु हुन्छ । खासमा ती चियापसलेले कसरी राम्रो आम्दानी गरे त्यो त उनैलाई थाहा होला ।
क्यासिनो सिटी हुँदा नेपालगञ्ज उन्नतिमा टेवा पुग्ने बताइरहनु भएका मेयर राणाको अर्को यस्तो बुझाई रहेको छ । नेपालगञ्ज रुट भएर ठूलो संख्याका भारतीय मानसरोबर जान्छन् । मानसरोबर जाने तीर्थालुले नेपालगञ्जका होटल ६ महिना भरिभराउ हुन्छ । त्यसपछिको ६ महिना सुख्खा हुने स्थिति हुन्छ । यो अवस्थामा क्यासिनो शहर बनाउन सकेमा त्यो अफसिजनको ६ महिना क्यासिनो खेल्न आउने भारतीयले गर्दा होटलहरु भरिभराउ हुन्छन् ।
मेयर राणाले ९÷१० वटा क्यासिनो खुल्न थालेको जानकारी दिनुभयो । पछिल्लो पटक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईको नेपालगञ्ज आगमनमा पनि मेयर राणाले क्यासिनोको लागि जोडदार आवाज उठाउनुभयो । दोस्रो पटक मेयर भएका राणाको पदावधि सकिनु अघि नेपालगञ्ज क्यासिनो सिटी बन्ला ? हेर्न बाँकी नै रहेको छ ।